‘Ihe Banyere Gị Na-emetụ Jehova n’Obi’​—⁠1 Pita 5:7
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Jun 2016
GỤỌ NKE Acholi Albanian Amharic Angolan Sign Language Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabiye Kannada Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Marathi Maya Mongolian Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sena Serbian Serbian (Roman) Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Yoruba Zande Zapotec (Isthmus)
‘Ihe Banyere Gị Na-emetụ Jehova n’Obi’
GỊNỊ mere obi kwesịrị iji sie gị ike na Jehova na-eche banyere gị n’eziokwu? Otu n’ime ihe mere obi ji kwesị isi gị ike bụ na ọ bụ ihe Baịbụl kwuru. Pita nke Mbụ 5:7 sịrị: “Na-atụkwasịnụ ya nchegbu unu niile, n’ihi na ihe banyere unu na-emetụ ya n’obi.” Gịnị mere obi ji kwesị isi gị ike na ihe banyere gị na-emetụ Chineke n’obi?
CHINEKE NA-EGBORO NDỊ MMADỤ MKPA HA
Jehova gosiri àgwà ọma anyị ga-eṅomi. Ọ dị obiọma ma na-emesapụ aka
Otu n’ime ihe ndị na-egosi na ihe banyere anyị na-emetụ Chineke n’obi bụ na o nwere àgwà ndị anyị ga-achọ ka ezigbo enyi anyị nwee. Ndị na-egosi ibe ha obiọma ma na-emesapụrụ ibe ha aka na-abụkarị ezigbo enyi. O doro anya na Jehova dị obiọma, na-emesapụkwara ndị mmadụ aka kwa ụbọchị. Dị ka ihe atụ, “ọ na-eme ka anyanwụ ya waara ndị ọjọọ na ndị ọma, na-emekwa ka mmiri zooro ndị ezi omume na ndị ajọ omume.” (Mat. 5:45) Olee uru anwụ na mmiri ozuzo bara? Otu n’ime uru ha bara bụ na Chineke na-eji ha ‘enye ndị mmadụ nri n’ụba, na-emekwa ka ha nwee obi ụtọ.’ (Ọrụ 14:17) N’eziokwu, Jehova na-eme ka ụwa na-emepụta nri n’ụba. Ezigbo nri sokwa n’ihe ndị kacha eme anyị obi ụtọ.
Oleezi ihe mere agụụ ji agụgbu ọtụtụ ndị? Ọ bụ n’ihi na anyaukwu emeela ka inwetakwu ikike na akụnụba dị́ ndị ọchịchị mkpa karịa ime ka ihe dịrị ndị mmadụ mma. Ma, n’oge na-adịghị anya, Jehova ga-eme ka nsogbu ahụ kwụsị. Ọ ga-eji ọchịchị ya dị́ n’eluigwe, nke Ọkpara ya bụ Eze ya, dochie ọchịchị ndị e nwere taa. N’oge ahụ, o nweghịzi onye agụụ ga na-agụgbu. Ka ọ dị ugbu a, Chineke na-elekọta ndị jí obi ha niile na-efe ya. (Ọma 37:25) Ọ̀ bụ na ihe ndị a anaghị egosi na ọ hụrụ anyị n’anya?
JEHOVA NA-EWEPỤTARA ANYỊ OGE
Jehova gosiri àgwà ọma anyị ga-eṅomi. Ọ na-ewepụtara anyị oge
Ezigbo enyi gị ga na-ewepụtara gị oge. Gị na ya nwere ike iji ọtụtụ awa kwurịta ihe na-amasị unu abụọ. Ezigbo enyi ga-egekwa ntị nke ọma mgbe ị na-akọrọ ya nsogbu gị na ihe ndị na-echu gị ụra. Jehova ọ̀ na-ege anyị ntị otú ahụ? À na-ajụkwa ajụ? Ọ na-anụ ekpere anyị. Ọ bụ ya mere Baịbụl ji gwa anyị ka anyị ‘nọgidesie ike n’ekpere,’ ‘na-ekpekwa ya n’akwụsịghị akwụsị.’—Rom 12:12; 1 Tesa. 5:17.
Awa ole ka Jehova ga-achọ iji gee ntị n’ekpere gị? Ihe Jizọs mere mgbe ọ chọrọ ịhọta ndị ga-abụ ndịozi ya zara ajụjụ a. Baịbụl kwuru na ọ ‘nọgidere n’abalị ahụ dum na-ekpeku Chineke ekpere.’ (Luk 6:12) N’ekpere ahụ, o nwere ike ịbụ na Jizọs kpọrọ ọtụtụ n’ime ndị na-eso ụzọ ya aha n’otu n’otu, chebara àgwà ọma ha na ihe ha na-anaghị emeta echiche, rịọkwa Nna ya ka o nyere ya aka ịhọta ndị ga-abụ ndịozi ya. Mgbe chi bọrọ, Jizọs ma na ya ahọtala ndị kacha ruo eruo ga-abụ ndịozi ya. Ebe Jehova bụ “Onye na-anụ ekpere,” ọ na-atọ ya ụtọ ịnụ ekpere niile sí ndị mmadụ n’obi. (Ọma 65:2) Ọ bụrụgodị na mmadụ ejiri ọtụtụ awa kpee ekpere banyere ihe na-echu ya ụra, Jehova anaghị agụkọ awa ole onye ahụ ji kpee ya.
CHINEKE NA-AGBAGHARA MMEHIE
Jehova gosiri àgwà ọma anyị ga-eṅomi. Ọ na-agbaghara mmehie
Ọ na-esidịrị ndị bụ́ ezigbo enyi ike mgbe ụfọdụ ịgbaghara ibe ha. Mgbe ụfọdụ, ndị bụrụla enyi ọtụtụ afọ na-etisa n’ihi na o siiri ha ezigbo ike ịgbaghara ibe ha. Jehova adịghị otú ahụ. Baịbụl gwara ndị niile chọrọ ife Chineke ka ha na-arịọ ya mgbaghara, ‘n’ihi na ọ ga-agbaghara ha mmehie ha n’ụzọ dị ukwuu.’ (Aịza. 55:6, 7) Gịnị mere Chineke ji agbaghara mmehie otú ahụ?
Ihe kpatara ya bụ na ịhụnanya Chineke enweghị atụ. Otú o si hụ ụwa n’anya mere ka o zite Ọkpara ya, bụ́ Jizọs, ka ọ bịa gbapụta ndị mmadụ n’aka mmehie na nsogbu ọ na-akpatara ha. (Jọn 3:16) Ma e nwere uru ọzọ àjà ahụ Jizọs chụrụ bara. Ọ na-eme ka Chineke gbaghara ndị ọ hụrụ n’anya. Jọn onyeozi dere, sị: “Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, o kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, nke mere na ọ ga-agbaghara anyị mmehie anyị.” (1 Jọn 1:9) N’ihi otú Jehova si agbaghara ndị mmadụ, anyị nwere ike ịna-abụ ndị enyi ya. Ihe a e kwuru ebe a na-emetụ anyị n’ahụ́.
Ọ NA-AGBATARA GỊ ỌSỌ ENYEMAKA
Jehova gosiri àgwà ọma anyị ga-eṅomi. Ọ na-agbatara anyị ọsọ enyemaka
Ezigbo enyi na-agbatara ndị ọzọ ọsọ enyemaka. Jehova ọ̀ na-eme otú ahụ? Baịbụl kwuru banyere ohu Chineke, sị: “Ọ bụrụgodị na ọ daa, ọ gaghị akụ afọ n’ala, n’ihi na Jehova ji ya aka.” (Ọma 37:24) E nwere ụzọ dị́ iche iche Jehova si enyere ndị na-efe ya aka. Chegodị banyere otu ihe mere n’agwaetiti a na-akpọ Sent Krọị, nke dị́ n’Oké Osimiri Karibian.
E nwere otu nwata nwaanyị ụmụ akwụkwọ ibe ya nọ na-enye nsogbu n’ihi na ọ naghị eso ha egbupụrụ ọkọlọtọ maka na ọ bụ Onyeàmà Jehova. Ọ rịọrọ Jehova ka o nyere ya aka, kpebizie ịgwa ha ihe mere na ọ naghị egbupụrụ ọkọlọtọ. N’oge ọzọ e nyere ya ohere ịgwa ndị klas ha okwu, o kwuru banyere igbupụrụ ọkọlọtọ. O ji Akwụkwọ M nke Akụkọ Bible kọwaa otú ihe Shedrak, Mishak, na Abednego mere si mee ka o kpebie na ọ gaghị egbupụrụ ọkọlọtọ. Ọ sịrị: “Jehova chebere ndị Hibru atọ ahụ n’ihi na ha ekweghị akpọrọ ihe oyiyi isiala.” O gosiri ụmụ klas ha niile akwụkwọ ahụ. Mmadụ iri na otu n’ime ha anara ya. Obi tọrọ ya ezigbo ụtọ n’ihi na ọ matara na ọ bụ Jehova nyere ya ike na amamihe o ji kọwaara ha ihe ahụ na-adịghị mfe.
O mewe gị obi abụọ ma Jehova ọ̀ hụrụ gị n’anya, tụgharịa uche n’ebe ụfọdụ na Baịbụl, dị́ ka Abụ Ọma 34:17-19; 55:22; na 145:18, 19. Jụọ ndị nọterela aka n’ọgbakọ otú Jehova sirila gosi na ọ hụrụ ha n’anya. I nwee nsogbu, kọọrọ ya Jehova. Ihe ndị a ga-eme ka ị hụ ihe gosiri na ‘ihe banyere gị na-emetụ ya n’obi.’
Otú Ị Ga-esi Gosi na Obi Dị Gị Ụtọ na Jehova Na-akpụzi Anyị
Ị̀ Na-ekwe Ka Jehova Kpụzie Gị?
“Jehova Bụ́ Chineke Anyị Bụ Otu Jehova”
Ekwela Ka Ihe Ndị Ọzọ Na-emejọ Mee Ka Ị Sụọ Ngọngọ
Àgwà Dị́ Chineke Mma Nke Bara Uru Karịa Dayamọnd
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Jun 2016
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Jun 2016